Resin-dry zareo tamin’ny tirs au but 3 – 2 omaly alahady 21 jolay 2019, tamin’ny lalao famaranana natao teny amin’ny kianja Elgeco Plus teny amin’ny By Pass, ny ekipan’ny Mi-20 (Cameroun)l rehefa nirava ady sahala 0-0 ny roa tonta teo amin’ny fotoana ara-dalàna. Ny Rmd (Namibie) nandresy an’i Sab Nam (Guinée) teo amin’ny fiadian-toerana no nitana ny laharana faha-3 tamin’ity fifaninanana ity. Nahazo ny amboaran’ny mpilalao mendrika indrindra kosa i Jean Yves (Senegal) ary mpiandry harato mendrika indrindra i Joma (Cameroun). Samy notoloran’ny Orange Madagascar “maillots complets” avokoa ireo ekipa 24 nandray anjara tamin’ity fifaninanana ity. Eritreretina hoentina any amin’ny Faritra avaratry ny nosy ny Orange Kitra 2020 manaraka, hoy Rtoa Rakotomalala Anita “Chef de department sponsoring” ao amin’ny Orange Madagasikara, raha tsy misy ny sampona.